Sababo badan oo ay dadka caanka ah u isticmaalaan Waxyaalaha CBD • Daroogada Inc.eu
Cannabidiol (ama si fudud CBD) waa kiimiko aan cilmi nafsi ahayn oo ka yimaada warshada xashiishka ee maanta dunida qabsatay. Laakiin maahan kaliya dadweynaha guud ee ka caawiyay kor u qaadista wacyiga CBD iyo waxyaabo kala duwan oo CBD ah oo la soo geliyey sida dhibcaha CBD, kaabsoosha, maadooyin en edibles. Dadka caanka ah sidoo kale way jecel yihiin.
2 muruq muruq
3 Maqaarka maqaarka
4 Cudurka Parkinson
5 7 sababood oo dheeri ah oo dadka caanka ahi u jecel yihiin alaabada CBD
6 Ugu dambeyntii ku saabsan dadka caanka ah iyo CBD
Maaddaama dadka caanka ahi aysan ku cusbayn waxyaabaha ugu da'da yar iyo alaabooyinka soo caanbaxaya, tirooyin badan oo dadweyne ah ayaa sidoo kale bilaabay isticmaalka iyo oggolaanshaha saliidda CBD ee walwalka iyo niyadjabka, xanuunka, iyo xanuunno kale oo badan.
Si loo muujiyo, waa kuwan afar caan ah oo Mareykan ah oo ku dhaaranaya CBD iyo sababaha ay u go'aansadeen inay isticmaalaan alaabada CBD.
Aktarada Mareykanka iyo heesaa Emma Roberts waxay umuuqataa inay runtii jeceshahay alaabada CBD. Ka dib markii ay la kulantay shil baabuur naxdin leh 2010, oo aan kaliya burburin gaarigeeda cusub ee la iibsaday laakiin sidoo kale la kulmay xanuun aad u weyn, Emma waxay u jeesatay CBD si ay uga nafiso xanuunka. Mid ka mid ah waxyaabaha ay ugu jeceshahay ayaa sidoo kale ah sheyga qubeyska ee CBD ee ay u isticmaasho yareynta buuqa iyo dejinta jirkeeda oo dhan.
Atariishada Mareykanka iyo filim sameeye Olivia Wilde waxay hogaamisaa nolol qancisa waxayna ciyaaraysaa doorar badan oo kaladuwan. Waxay sidoo kale sameysay kulankeedii ugu horreeyay ee Broadway 2017, halkaas oo ay 1984 ayaa ciyaaray doorka hogaaminta, Julia.
Si kastaba ha noqotee, ka dib markii ay sameysay ciyaar Broadway muddo lix bilood ah, waxay la kulantay xanuun qoorta ah oo weyn oo ka tagay jirkeeda oo u muuqda mid gebi ahaanba burburay. Si looga fogaado qaadashada daawooyin badan oo xanuun baabi'iye ah, Olivia Wilde waxay u jeesatay faa iidooyinka nasashada ee CBD. Isticmaalka looshanka CBD waxaa loo arkay inay waxtar u leedahay iyada oo yareyneysa murqaha iyo xanuunada.
Maaddaama qaarkood ay u nugul yihiin dhibaatooyinka soo raaca ee daroogooyinka kala duwan, stylist / lataliyaha moodada Mareykanka, qoraa iyo tifaftiraha majaladda Stacy London waxay raadsatay bedel kale si loo yareeyo xanuunka ka dib qalliinka laf-dhabarka iyo astaamaha cudurka 'psoriatic arthritis'. Tani waxay u horseedday alaabooyinka CBD, taas oo u muujisay inay si aad ah waxtar ugu leedahay iyada, iyada oo u oggolaanaysa iyada inay joojiso qaadashada dawooyinka xanuunka loo qoro ka dib 10 maalmood oo keliya oo aan waligood dib ugu laabanin daawooyinka.
Dad badan oo caan ah ayaa sidoo kale u adeegsada CBD daryeelkooda (afb.)
Isticmaalka saliida CBD ee xanuun joojinta, Stacy sidoo kale waa taageere weyn oo loo yaqaan 'looshinta' CBD, taas oo ka caawisay iyada inay ka yareyso muruqyada xanuunka ee xirashada xargaha ka dib qalliinka iyo kala-goysyada xanuunka, taas oo ku weyn xanuunka 'psoriatic arthritis' waxayna hagaajineysaa xaaladaha maqaarka sida cambaarta cudurka psoriasis iyo maqaarka qalalan. Waxay xitaa xustay inay codsato habeenkii si ay uga caawiso bogsashada nabarkeeda qalliinka.
Kim Kardashian waxay sidoo kale had iyo jeer ka hadlaysay taageeradeeda iyo jacaylka ay u hayso cannabidiol. Waxay si gaar ah u jeceshahay boomaatada leh xoqida hemp waxayna badanaa qaadataa daawooyinka isboortiga iyo daaweynta fayoqabka ee isticmaala alaabada lagu buuxiyey cannabidiol.
Jilaa Canadian-Mareykan ah oo hawlgab ah, soo saare filim, qoraa iyo dhaqdhaqaaqe, Michael J. Fox ayaa laga helay cudurka Parkinson sanadkii 1991, isagoo aad u da 'yar oo 29 jir ah. Sagaal sano ka dib, wuxuu go'aansaday inuu aasaaso Michael J. Fox Foundation oo loogu talagalay cilmi-baarista Cudurka Parkinson (MJFF), oo loo tixgeliyo aasaaska ugu weyn ee aan faa'iido doonka ahayn ee adduunka ee baaraya cudurka Parkinson oo ujeedkiisu yahay inuu lacag u ururiyo cilmi baarista, daaweynta iyo ugu dambeyntii daaweynta cudurkan halista ah.
Mid ka mid ah daaweynta MJFF diirada saarto waa marijuana caafimaad, gaar ahaan isticmaalka saliida CBD. Dhowr ka mid ah daraasaddan waxaa ka mid ah cilmi-baaris lagu sameeyo CBD oo ah daaweyn kale oo lagu maareeyo calaamadaha iyo astaamaha cudurka Parkinson. Michael J. Fox ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa inuu isticmaalayo CBD si uu u daaweeyo qaar ka mid ah astaamihiisa wuxuuna kula talinayaa dadka kale ee qaba cudurka Parkinson inay isku dayaan.
7 sababood oo dheeri ah oo dadka caanka ahi u jecel yihiin alaabada CBD
Sida aad arki karto, sidoo kale way badan yihiin dadka caanka ah ku booday tareenka cannabidiol. Maxaa ka dhigaya beddelkan xulasho faa'iido leh? Halkan waxaa ku yaal qoraal deg deg ah oo ku saabsan sababta adduunku ugu muuqdo inuu jecel yahay dhirta cajiibka ah:
Waxay ka caawisaa daweynta xaalado kala duwan oo ay ka mid yihiin suuxdin, walaac, niyad jab, hurdo la'aan iyo xaaladaha maqaarka
Wuxuu u dhaqmaa sidii xanuun joojiye xoog leh, oo ka dhigaya aalad wax ku ool ah maaraynta xanuunka
Cadaadiska buufisku wuxuu ka caawiyaa dadka inay madaxooda nadiifiyaan oo ay dejiyaan neerfayaasha
Murqaha wax ku oolka ah ee ka hortaga murqaha, dhaawacyada iyo ka-kabashada iyo koritaanka
Waxyaabaha awood-u-leh ee ka-hortagga bararka ayaa gacan ka geysanaya hagaajinta wax soo saarka saliidda, taasoo horseedda maqaarka caafimaadka iyo dhalinyarada
Mood kor u qaade ka caawiya dadka inay maareeyaan walaacooda
Neuroprotectant wax ku ool ah oo ka caawin kara shakhsiyaadka la dagaallama ciladaha neerfaha iyo xumaanshaha
Ugu dambeyntii ku saabsan dadka caanka ah iyo CBD
Sida aad arki karto, dadka caanka ah iyo dadka maalin kasta si isku mid ah ayaa u qiimeeyay baahida loo qabo cannabidiol ee dagaalka maalinlaha ah. Haddii aad ka shaqeyso showbiz ama aad leedahay shaqo joogto ah 9 illaa 5, nolosha qarniga XNUMXaad waxay noqon kartaa mid aad u baahan.
Daawooyinka dabiiciga ah, sida cannabidiol, waxay ka caawiyaan shakhsiyaadka maareynta culeyska, xiisadda, dareenka iyo welwelka. Caankee baa saameyn kugu yeeshay inaad tijaabiso xashiishka? La wadaag khibradahaaga hoosta oo adduunka u sheeg sida cannabidiol uu noloshaada ugu beddelay mid wanaagsan!
Ilaha ao CABusinessReport (EN), Lovebelfast (EN), MetalAddicts (EN), MJFF (EN)
Saynisyahannadu waxay "jabsadeen" khamiirka khamriga si ay u soo saaraan CBD iyo THC
Seynisyahannadu waxay u beddelaan khamiirka khamriga (Saccharomyces cerevisiae) tetrahydrocannabinol (THC), oo ah xarunta nafsaaniga ah ee laga helo xashiishadda ...
Daraasadda: CBD waxay yareyn kartaa dhimashada unugyada maskaxda
Daraasad dhowaan la sameeyay ayaa lagu baaray waxtarka CBD ee ka dhanka ah neerotoksiga hydrogen peroxide (H2O2), molecule ...
Maamulaha guud ee AdvisorShares ayaa saadaaliyay in 2020 ay sanad wanaagsan u noqon doonto warshadaha xashiishadda
In kasta oo rajo xumada maalgashadayaasha ee xashiishadda ay hoos u dhacday, sida uu sheegay Noah Hamman, oo ah madaxa ...
Rugta tubaakada waxay u aragtaa mustaqbal dahab ah xashiishadda
Naadiyada xashiishadda ee Barcelona ayaa wajahaya xidhitaan sababo la xiriira dib -u -dhac xagga sharciga ah
Kolombiya waxay xoojisay dhoofinta xashiishadda la qalajiyey